पश्चिमा विश्लेषण : महामारीपछि सी चिनफिङ यसरी बने शक्तिशाली नेता
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङका अगाडी एउटा कुरा सिसा झैँ छर्लङ्ग पारिदियो, त्यो हो पश्चिमी देशहरुका ताराहरु डुबिरहेका थिए र आफूँ उदाउदो सूर्य जसरी विश्वभर छाउँदैछु ।
गत वर्षको जुन महिनादेखि चीनले जसरी कोरोना महामारीको सामना गर्यो, उसको शासन–व्यवस्था पश्चिमी देशहरुको लोकतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट छ भन्ने सन्देश दियो ।
जतिबेला अमेरिका र युरोप महामारी र लकडाउनका कारण नोक्सान बेहोरिरहेको थियो, चीन ती केही देशहरुमध्ये एक थियो जहाँको जनजीवन एक हदसम्म सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको देखिन थालेको थियो । त्यस समय चीनमा रेष्टुरेन्टको ढोका पाहुनाका लागि खुल्न थाले, मानिस सभा–समारोहमा भेला हुन थाले र विदाको योजना बनाउँन थाले ।
महामारीपछि काम गर्न थाल्ने चीन विश्वको पहिलो यस्तो अर्थव्यवस्था मात्रै थिएन, ऊ सन् २०२० को तेश्रो त्रैमासिकमा ५ प्रतिशतको दरले विकास गर्ने विश्वको ठूलामध्ये एक्लो अर्थव्यवस्था भएको देश बन्यो । र अबको पाँच वर्षमा चीनले अमेरिकालाई पछि पार्ने धेरैले भविष्यवाणी गरेका छन् ।
रुपछि चीन दोश्रो देश थियो जसले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप तयार गर्नमा सफलता हासिल गरेको थियो । आफ्ना नागरिकलाई खोप दिनअघि देखि नै चीनले थुप्रै देशहरुमा यसको निर्यात सुरु गरिसकेको थियो । यसमा केही ल्याटिन अमेरिकी देशहरु पनि छन् ।
सेन्टर फर स्ट्रयाटेजिक एण्ड इन्टरनेशनल स्टडीजका निर्देशक बनी ग्लेजर भन्छिन्, ‘कठोर तरिका अपनाएर सी चिनफिङले महामारीमाथि नियन्त्रण पाउन सफल बने । कोरोना महामारी रोकथाममा अमेरिकाको तुलनामा चीनलाई बढी सफल हुनुले चीनको साम्यवादी व्यवस्था पश्चिमी देशहरुको लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा उत्कृष्ट छ भन्ने कुराको प्रमाण दियो ।’
चीनको यस सफलताको पछाडी मात्र राष्ट्रपति सी चिनफिङ रहेको अधिकांश विश्लेषकहरुको भनाई छ । चीनमा आज पनि नागरिकहरु मुलक तथा कम्युनिस्ट पार्टिका संस्थापक माओत्से तुङको माला जप्छन्, यो छवि अब सी चिनफिङमा पनि देखिन थालेको छ ।
सेन डियागो युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाकी प्राध्यापक सुजेन शिर्क भन्छिन्, ‘सी चिनफिङले सत्तामा आफ्नो पकड बलियो राख्ने प्रक्रिया महामारी अघिदेखि नै सुरु गरेका थिए, तर कोरोना महामारीले उनको उद्देश्यमा उनलाई नै मद्दत पुगेको तथ्यमा कुनै शंका छैन । यदि महामारी नआएको भए भने उनका लागि केही कठिन हुन्थ्यो ।’
अब प्रश्न उठ्छ सी चिनफिङले यसमा कसरी सफलता पाए ? सी चिनफिङसँग पहिलाभन्दा धेरै गुणा बढी राजनीतिक शक्ति छ किन भनिँदैछ ?
सुरुवाती हारदेखि सफलताको यात्रासम्मः
मार्चको सुरुवातमा कम्युनिस्ट पार्टीको भर्चुअल बैठक बलाइएको थियो जसमा पहिलो पटक चीन सरकारले महामारीमाथि जीत भएको सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिएको थियो । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अङ्ग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्सले सार्वजनिक लेख्यो, सी चिनफिङको नेतृत्व बिना चीन कोरोना भाइरसका विरुद्ध लडाईमा पश्चिमी देशहरुभन्दा अगाडी आउन सक्दैन थियो ।
त्यस्तै, साउट चाइना मर्निङ पोस्टले लेख्यो, चीनका राष्ट्रपतिले महामारीमाथि नियन्त्रण पाउनमा देशको सर्वश्रेष्ठतालाई रखांकित गरेका छन् । वासिङ्टनस्थित थिङ्क ट्याङ्क ब्रुकिङ्ग्स इन्स्टिट्युटमा चिनियाँ मामिला विशेषज्ञ रेयान हैस भन्छन्, ‘सीको नेतृत्वले कोरोना महामारीबाट बचाउँने उसको तौर–तरिकालाई सफलताको कहानीमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्यो । यसको तुलना अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशहरुको लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग गरियोस् ।’
क्यानडाका कार्लटन विश्वविद्यालयमा चीन मामिलाका विशेषज्ञ जेरेमी पेल्टील कारोना महामारीले चीनलाई आफ्नो राष्ट्रवादी प्रोपागान्डालाई बलियो बनाउँनमा मद्दत पुगेको कुरामा सहमति जनाउँछन् । यसको उद्देश्य सी र पार्टीको नेतृत्वका लागि समर्थनलाई बलियो बनाउँनु रहेको उनको दावी छ ।
‘कोरोना महामारीका दौरान चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले पश्चिमी देशहरु, विशेषगरी अमेरिकाको स्थितिका बारेमा दैनिक रिपोर्टिङ गरे । यसले चीनका जनतामा एउटा कुरामा विश्वास बलियोसँग बढायो कि उनीहरुको साम्यवादी व्यवस्था पश्चिमी देशहरुको तुलनामा उत्कृष्ट छ,’ जेरेमी भन्छन्, ‘जब चीनको पश्चिमी देशहरुसाग सम्बन्ध बिग्रियो र चीन विरोधी भवनाहरु बढ्न थाल्यो, चीनमा नागरिकको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीका लागि समर्थन झनै बढ्न थाल्यो ।’
यद्यपि, चीनलाई महामारीमाथि नियन्त्रणमा पाएको सफलताको सुरुवात राम्रो कदमबाट भएको थिएन । महामारी सुरु भइसकेको थियो तर उसले लुकाउने प्रयास गर्यो, जसले चिनियाँ सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । वुहानमा के भइरहेको छ भनेर विश्वलाई बताउँन चाहने चिकित्सक र पत्रकारलाई चुप गरायो ।
एक यस्तो समय थियो जतिबेला सी चिनफिङ र उनको पार्टी चीनमा अलोकप्रिय बनेको थियो । सी चिनफिङले सुरुवातमा महामारी नियन्त्रणको काम प्रधानमन्त्रीमा छोडेको थिए र केही सातासम्म उनी सार्वजनिक पनि भएनन् ।
‘सी चिनफिङको हातमा कमान नभएको जस्तो लाग्थ्यो । तर जब उनी सार्वजनिक भए, सबै कुरा उनको नियन्त्रणमा आउनु नै थियो र यसका सार्थ पूर्ण नियन्त्रणको एक प्रभावकारी व्यवस्था लागू गरियो,’ सुजेन भन्छिन् ।
महामारीमा सी चिनफिङको भूमिकाः
महामारी नियन्त्रणका लागि चीनले जुन तरिका र शैली अपनायो त्यो निक्कै कठोर थियो । चीनमा मानवअधिकारको उल्लंघन भएको रिपोर्ट आए, यसका बाबजुद पनि चीनले त्यो हासिल गरेर देखायो जो थुप्रै पश्चिमी विकसित देशहरुले हासिल गर्न सकेनन् ।
सुरुवाती गल्तीहरु र महामारीको तथ्य लुकाउने प्रयासपछि चीनले लकडाउन, परीक्षण, ट्रेसिङ र क्वारेन्टिको माध्यमबाट निर्णायक कदम उठायो । यसले महामारी रोक्नमा मद्दत गर्यो र त्यहाँ संक्रमणबाट हुने मृत्युको संख्या अप्रत्याशित रुपले कम हुनपुग्यो । अर्कोतिर चीनले आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन सुरु गरिसकेको थियो ।
चीनमा सर्वसाधारणको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्कनु र अर्थव्यवस्थाले गति पकड्नु, यी दुई घटना यस्तो समयमा भयो जतिबेला पश्चिमी देशहरु भविष्यको कार्ययोजनामै काम गरिरहेका थिए । र यसमा कुनै शंका छैन कि यसमा सी चिनफिङकै हात रहेको प्राध्यापक जेरेमी पेल्टेलको भनाई छ ।
प्राध्यापक सजेन शिर्कको रायमा यसले सी चिनफिङको पार्टीको स्थिति पनि बलियो बनायो । आगामी वर्ष पार्टीको संसदमा सीलाई तेश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गरिने आशा व्यक्ति समेत गर्न थालिएको छ ।
माओ र देङ शियोओपिङपछि चीनको कुनै पनि नेता १० वर्षभन्दा बढी सत्तामा रहन सकेका छैनन् । तर केही वर्षयता सी चिनफिङको बाटोमा जे चीज बाधा बन्न खोजिरहेको थियो त्यसलाई हटाउने संकेत दिइरहेका थिए ।
चीनको खोप कटनीतिः
कारोना महामारी लडाईमा चीनको सफलताले भने उसको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई भने सुधार्नमा मद्दत पुगेन, तर एक बलियो उदाहरण बन्यो । पिउ रिसर्चको गत वर्षको अक्टोबरमा आएको एक रिपोर्टले विकाशोन्मूख देशहरुमा चीनको छवि सन् २०२०मा नकारात्मक तर्फ बढेको देखाउँछ ।
यसका पछाडि थुप्रै कारणहरु छन् । यसमा कोरोना महामारीलाई सुरुमा जसरी नियन्त्रण प्रयास गर्यो, तथ्य लुकाउने प्रयास गर्यो, सी चिनफिङको हङकङ नीीत र ताइवानलाई चीनको धम्की, शिनजियाङ्गमा उहिगुर मुस्लिम समुदायमा मानवाधिकारको उल्लंघनसँग जोडिएको रिपोर्टआदि ।
तर महामारीले चीनलाई आफ्नो विश्वस्तरमा असरलाई बढाउँने अवसर पनि दियो । न्यू सिल्क रोड परियोजनाको माध्यमबाट चीनले थुप्रै देशहरुमा मास्क, सुरक्षा उपकरण पुर्याउन थाल्यो ।
अब कोभिड–१९ विरुद्धको खोप गेम–चेन्जर बनेर अगाडी आएको छ । कोरोना खोप निर्यात गर्ने चीन पहिलो देशहरुमध्ये एक हो । चीनको खोप मोर्डना वा फाइजरको तुलनामा कम प्रभावकारी होला, तर विश्वभरका थुप्रै देश जो खोप हासिल गर्न सक्दैनन्, उनीहरुका लागि चिनियाा खोप विकल्प जस्तै हो ।
महामारीको सुरुवातमा सी चिनफिङ नाजुक स्थितिमा थिए, तर अब उनी पहिलेभन्दा शक्तिशाली नेता हुन् । सी एक्लो नेता हुन् जसको तुलना माओसँग गर्न सकिन्छ र कोरोना महामारीले उनको तेश्रो कार्यकालका लागि बाटो तयार गरेकाेमा कुनै शंका छैन । – बिबीसी हिन्दीबाट
शनिवार २१, चैत २०७७ १३:४८:४६ मा प्रकाशित